Fiber Optical Transmitter ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | China Fiber Optical Transmitter စက်ရုံ
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် CATV Model ZTX1310M / ZTX1550M ထုတ်လွှင့်သည့်ရုပ်သံလိုင်း CATV VSB / AM ဗွီဒီယိုလင့်ခ်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော CATV ဂီယာအတွက်အဆင့်မြင့်ဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ Model ZTX1310M / ZTX1550M သည် 45 band မှ 1000MHz မှထူးခြားသော Analog bandwidth ကို band-band, low-band, FM, mid-band နှင့် high-band လိုင်းများအားလုံးသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ဒီအင်္ဂါရပ်ကသုံးစွဲသူကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့ဗွီဒီယို ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုပေးဖို့စနစ်ကိုခွင့်ပြုတယ် ဗွီဒီယို၊ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးစက်သို့မဟုတ်ကေဘယ်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုနှင့် တွဲဖက်၍ မော်ဒယ် ZTX1310M / ZT ...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ZTX1800 သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် dual-switching power supply ပါ ၀ င်သောမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ၁၅၅nm ပြင်ပမော်ဂျူလ်ပုံသေ transmitter အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ တစ်ယူနစ်အလင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုလုံးသည်ပျံ့နှံ့မှု၏သြဇာကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သောကျဉ်းမြောင်းသော bandwidth၊ ဆူညံသံနည်းခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်လှိုင်း DFB လေဆာကိုအသုံးပြုသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်သော့ချက်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ငါတို့ကုမ္ပဏီ၏စနစ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနည်းပညာ၊ SMNP ကွန်ယက်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ၊ စက်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့် ...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ZTX1310 series 1310nm optical transmitter သည် AGC function ဖြင့်အရည်အသွေးမြင့် optical transmitter တစ်ခုဖြစ်သည်။ transmitter ရဲ့အမြင့်ဟာ IU ဖြစ်ပြီး 19” frame မှာအဆင်ပြေပါတယ်။ အဓိကထုတ်ကုန်များသည် AOI, EXSTON သို့မဟုတ် Ortel DFB ဆူညံသံနည်းသော thermoelricric ရေခဲသေတ္တာနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လှိုင်းလေဆာများပါ ၀ င်သည်။ နည်းပညာစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းများအားလုံးသည်အလားတူတင်သွင်းထားသောပစ္စည်းကိရိယာစံချိန်စံညွှန်းများသို့ရောက်ရှိပြီးအရည်အသွေး၊
အင်္ဂါရပ်များ ၁။ အထူးသဖြင့် coaxial networks တိုးချဲ့ရန်အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသည်။ 2. သူ့မှာလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုရှိတယ် - function ကိုလက်ခံတာ၊ optical receiver ကိုအစားထိုးဖို့; 1 ~4optical node များသုံးစွဲရန်အသုံးပြုနိုင်သည့် output power2~ 4mW ထုတ်လွှင့်ခြင်း။ 3. အပြင်ဘက်တွင်အသုံးပြုခြင်းကောင်းမွန်သောရေစိုခံအိမ်သည် -45 ° C ~ + 85 ကဲ့သို့အလွန်ဆိုးသောအပူချိန်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ Technical parameter Item Unit Parameter Optical Receiver အပိုင်း Optical Power ကိုရယူပါ dBm -6 ~ +2(ပုံမှန် -1) Output port နံပါတ် ၁/၁ သို့မဟုတ် ၂/၀ ...
အပြင်ပိုင်း optical transmitter (ZTX1310W)
အင်္ဂါရပ်များ ၁။ အထူးသဖြင့် coaxial networks တိုးချဲ့ရန်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၁- ၄ node သုံးရန် node နှင့် transmitter ငယ်နှစ်ခုလုံးအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ 3. အပြင်ပန်းမော်ဒယ်, -45 ~ + 85 work အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ Parameter များသတ်မှတ်ချက်များ Parameters Optical Receiving Output နံပါတ် ၁ / ၁ 2/0 အလုပ်လုပ်တဲ့ Bandwidth (MHz) 47 ~ 862 Wavelength (nm) 1310/1550 Homo Noise Current7Input Power (dBm) -6 ~ +2 ပုံမှန် -1 Fiber Connetor FC / APC သို့မဟုတ် SC / UPC Optical Return ဆုံးရှုံးမှု (dB) ≥40 Return Loss RF (dB) ≥16 Unflatne ...
1550nm အတွင်းပိုင်းမော်ဂျူလ် Optical Transmitter (ZTX1550)
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ZTX1550 series 1550nm optical transmitter သည် CATV optical transmitter အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ transmitter ရဲ့အမြင့်ဟာ IU ဖြစ်ပြီး 19” frame မှာအဆင်ပြေပါတယ်။ အဓိကထုတ်ကုန်များသည် Ortel, MITSUBISHI DFB ဆူညံသံနည်းသော thermoelricric ရေခဲသေတ္တာနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လှိုင်းလေဆာရောင်ခြည်ပါရှိသည်။ နည်းပညာစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းများအားလုံးသည်အလားတူတင်သွင်းသောပစ္စည်းကိရိယာစံချိန်စံညွှန်းများသို့ရောက်ရှိပြီးအရည်အသွေး၊